Ireo mpandeha amin'ny fitsangatsanganana an-tsakany sy andavany Royal Caribbean Cruise Test Positive ho an'ny COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Cruising » Ireo mpandeha amin'ny fitsangatsanganana an-tsakany sy andavany Royal Caribbean Cruise Test Positive ho an'ny COVID-19
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Cruising • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao lafo vidy • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Olon-dehibe efa vita vaksiny efatra sy zaza roa tsy vita vaksiny no manaporofo fa COVID-19 an-tsambo Royal Caribbean Adventure of the Seas.
Enina ny fitsangatsanganana an'ny mpandeha an'habakabaka no manaporofo fa voan'ny coronavirus.
Tranga enina no voamarina taorian'ny fizahana haingana ny mpandeha.
Ireo mpandeha tratry ny aretina dia esorina amin'ny sambo ary entina mody.
Vondrona Royal Caribbean nanambara androany fa mpandeha enina amin'ny Royal Caribbean International's Adventure of the Seas sambo fitsangantsanganana no nanaporofo tsara ny COVID-19 nandritra ny fitsapana taorian'ny fitsangatsanganana an-dranomasina.
Olon-dehibe misy vaksiny miisa efatra izay nandeha nitokana no nanaporofo fa misy koa ankizy tsy vita vaksiny izay niaraka tamin'ny antoko iray. Amin'ireo mpandeha izay nanaporofo ny zava-nisy, ny telo tamin'ireo olon-dehibe dia tsy simptomatika, toy ny ankizy roa, raha ny iray tamin'ireo olon-dehibe kosa dia somary malemy ny soritr'aretina.
Ny mpitondra tenin'ny Royal Caribbean Lyan Sierra-Caro dia nilaza fa ny fitsapana tsara dia ampahany tamin'ny fitsapana mahazatra natao tamin'ny faran'ny dia an-dranomasina mba hahafahan'ny mpandeha manaporofo ny fitsapana ratsy tokony hody.
Ireo tranga enina dia voamarina taorian'ny fitiliana haingana nataon'ny mpandeha, ary ny fanandramana PCR taty aoriana dia nanamafy fa tsara ho an'ny virus COVID-19 izy ireo.
Rehefa avy nanamarina ny COVID-19 ireo mpitsabo voan'ny aretina dia natokana ho azy ireo avy hatrany ary ny fety fitsangatsanganana ary ny fifandraisana akaiky rehetra dia voaporofo ary nosedraina, hoy ny orinasa.
Royal Caribbean dia nilaza fa ny mpandeha enina dia halaina ara-pahasalamana amin'ny sambo ary hampidina azy ireo amin'ny fiaramanidina tsy miankina amin'ny vidin'ny orinasa.
Ny sambo fitsangantsanganana dia miantsona ao Freeport, any Bahamas.
Ny fitsangantsanganana Adventure of the Seas, izay niainga avy any Nassau any Bahamas tamin'ny 24 Jolay, dia nitaky ny hanaovana vaksiny feno sy hitsapana ny ratsy rehetra ny mpandeha 16 taona na mihoatra. Ireo tsy mahafeno fepetra amin'ny vaksiny dia tsy maintsy nampiseho valin'ny fitsapana ratsy tamin'ny dia.
Dee Brummett hoy:
13 Aogositra 2021 amin'ny 06:08
Inona no karazana olana ilain'ny olona iray vao azo ekena fa tsy voatifitra?